Lapel Pin, Medaly Fanatanjahantena, Keychain Metal - Kingtai
Tongasoa eto amin'ity tranokala ity!
lakolosy Krismasy sy haingo
Bookmark sy mpanapaka
Loka Pins/Badges Fahatsiarovana
Badge hoditr'ondry / badge de police/pins miaramila
Hetsika/Hazakazaka/Sets Lapel Pins
Pins Lapel Enamel malefaka
Vato kristaly Lapel Pins/Rhinestone Pins
Pins Lapel Glass
Pins vita pirinty
Pins Lapel Enamel mafy/Cloisonne Pins
MEDALY mahandro sakafo
Medaly amin'ny bisikileta
Tsy misy fikasihana keychain
Ny Kingtai dia mpanamboatra asa tanana metaly malaza fantatra. Mpikambana ao amin'ny Community Sean Hannity Lapel pin Community ihany koa izy io. Noho ny fanoloran-tenany tsy mihozongozona amin'ny kalitao ambony sy ny asa tanana, ary ny serivisy mpanjifa miavaka. Izay manana traikefa mihoatra ny 20 taona amin'ny famokarana asa tanana isan-karazany. Kingtai dia manana vondrona famolavolana tena tsara sy ekipa orinasa. Hatramin'ny nananganana azy, ny fahazoan-dàlana sy ny patanty azonay dia mihoatra ny 30, ny sasany dia Disney, Wal-Mart, Haryy Potter, Universal Studio, SGS, FDA, ary ISO9001.
Manolotra ny mpanjifanay entana avo lenta amin'ny vidiny mirary izahay, izay vitanay noho ny haben'ny toekarena azonay amin'ny famokarana faobe sy ny fahombiazany. Mitana firaketana an-tsoratra tsy azo resena izahay amin'ny fanaterana ara-potoana, ary mahatakatra ny fe-potoanan'ny mpanjifa. Liana foana izahay amin'ny fananganana fifandraisana maharitra amin'ny mpanjifanay, ary matetika izahay dia mahita ireo mitovy amin'izany miverina tsy tapaka amin'ny fametrahana baiko ho avy. Mikasika ny fifandraisana ara-barotra amin'ny orinasa.Misokatra amin'ny fiaraha-miasa izahay na lasa ampahany manan-danja amin'ny rojo famatsiana anao, koa aza misalasala mifandray aminay momba ny .
TOMBONY: Mpanamboatra medaly mifototra amin'ny Medaly sy boaty fonosana amin'ny endrikao manokana. Izahay...
Te hividy Keychains mahazatra ve ianao? Manana safidy miavaka izahay, Ny lakilen'ny...
Fampiasana tsara indrindra 2D lapel pin dia tena isan-karazany ary azo ampiasaina amin'ny fotoana isan-karazany! Ampiasao ny...
TOMBONY: Ireo mpanamboatra PVC mifototra amin'ny keychain PVC sy boaty fonosana amin'ny endrikao manokana....
Fanamboarana customization, Quality Assurance, Service Integrity Saran'ny fampiharana: Enterprise...
sary sokitra 3D
TOMBONY: Mpanamboatra medaly miorina amin'ny sary sokitra 3D sy boaty fonosana amin'ny famolavolanao manokana ...
Ny fanokafana tavoahangy mahasoa anay dia manao fety mahafinaritra sy fanomezana fampiroboroboana. Misokatra ny tavoahangy Homedals...
Miaraka amin'ny traikefa mihoatra ny 10 taona amin'ny famokarana vokatra vita amin'ny metaly sy asa tanana, manana serivisy tokana feno izahay, manomboka amin'ny famolavolana ka hatramin'ny vokatra vita, mba hahafahanao matoky.
Mametraka ny kalitao hatrany amin'ny toerana voalohany ary manara-maso hentitra ny kalitaon'ny vokatra isaky ny dingana.
Hatramin'ny nanombohany，Ny fahazoan-dàlana sy ny patanty azonay dia mihoatra ny 30 sekely, ny sasany dia Disney, Wal-Mart, Harry potter, Universal Studio, SGS, FDA ary ISO9001.
Kingtai craft product orinasa voafetra, izay manana traikefa mihoatra ny 20 taona famokarana asa tanana isan-karazany, ny fampidirana tanteraka ny orinasa sy ny varotra orinasa, noho izany dia samy manana endrika matotra vondrona sy ny orinasa ekipa.
Asa tanana sy fomba fanaovana badge
Hitan'ny tonian-dahatsoratry ny Kingtai fa mbola betsaka ny olona tsy dia mazava loatra momba ny dingana amin'ny fanamboarana badge. Anio aho dia hizara aminareo lahatsoratra momba ny fanamboarana badge. Ity dia lahatsoratra miandalana, manantena ny hanampy ireo namana manana fanontaniana. Ny dingana amin'ny famokarana badge ma...
Ny Foara Canton faha-130 dia hatao an-tserasera sy ivelan'ny aterineto ny 15-19 oktobra.
Handray anjara amin'ny fampirantiana an-tserasera sy ivelan'ny aterineto ny orinasanay. Ny laharan'ny tranoheva an-tserasera dia GI03 Ny laharan'ny tranoheva an-tserasera dia 10.3E46 ...
MOMBA ANTSIKA TANJONA VAROTRA Mifandraisa aminay KARERA
KingTai ankehitriny dia miasa miaraka amin'ny tanjona serivisy ho an'ny mpanjifa, ary nandray anjara tamin'ny fampirantiana Canton Fair sy Hong Kong nandritra ny taona maro. Manome serivisy tso-po ho an'ny mpanjifa izahay, ary manohy manavao miaraka amin'ny finoana ny zavaboary mahafinaritra
Adiresy:No.22, lalana fahatelo Xinle, valan-javaboary indostrialy Xinle, Maan Town, Huizhou City, Guangdong, Sina.